The Institution of Professional Executives Myanmar Employment Qualifications Board
IPEM Employment Qualifications Board (IPEMEQB)
Academic Credential Certification Service
Engineering Task and Competency
Global Engineering Dean Council (GEDC) recognizes IPEM Employment Qualifications Board (IPEMEQB) and
Effort by The Institution of Professional Engineers Myanmar (IPEM) to preserve the higher education in Myanmar.
IPEM Employment Qualifications Board (IPEMEQB) is established to provide the qualification
information references for the jobs advertised in the following employment groups managed by
The Institution of Professional Engineers Myanmar and Myanmar Vocational Training
Institution of Professional Engineers Myanmar နှင့် Myanmar Vocational Training Cooperation မှစီမံခန့်ခွဲသည့်
IPEM Employment Qualifications Board (IPEMEQB) ကိုထူထောင်သည်။
Recognition Policy of The Institution of Professional Engineers Myanmar and its network
group of employers regarding Myanmar and International Qualifications
The Institution of Professional Engineers Myanmar, The Institution of Professional Executives Myanmar and it’s networked group of employers in Myanmar have also set up the following policy to recognize the international qualifications for awarding the advanced standing in the courses of studies and employment purposes.
Those policies are applied in the following employments groups administered by the Institution of Professional Engineers Myanmar.
· No recognition of the qualifications awarded in any countries where their qualification authorities and professional associations’ policies of overseas skills recognition do not include the qualifications awarded in Myanmar at the same level of the qualifications status or reciprocal recognition of their qualifications at the same level of the qualifications status which is regarded by them on Myanmar Qualifications including those awarded by IQY Technical College of Highlight Computer Group & it’s affiliated educational institutions (IPEM Technological University).
· Recognition of the international qualifications not only needs maintaining the qualifications at international standard but also needs to safeguard the professionalism in Myanmar & to promote the reciprocal recognition and harmony among Myanmar nationals & the nationals of the foreign countries to enhance the work rights at the appropriate types of jobs where Myanmar nationals can utilize their skills & qualifications. It is one method of self protection strategy to protect the work rights of the citizens and nationals.
မြန်မာနိုင်ငံ၏ကျွမ်းကျင်သောအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့အစည်းနှင့် ၄ င်း၏အလုပ်ရှင်ကွန်ယက် အဖွဲ့တို့၏မြန်မာနိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံတကာအရည်အချင်းများနှင့်ပတ်သက်သောအသိအမှတ်ပြုမှုမူဝါဒ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ကျွမ်းကျင်သောအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့အစည်းမြန်မာနိုင်ငံရှိကျွမ်းကျင်သောအမှုဆောင်အရာရှိများအဖွဲ့အစည်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ၎င်း၏အလုပ်ရှင်ကွန်ယက်အဖွဲ့သည် လေ့လာမှုနှင့်အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများရပ်တည်မှုအား အားပေးကာကွယ် ရန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံတကာအရည်အချင်းများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်အောက်ပါမူဝါဒချမှတ်ထားသည်။
ထိုပေါ်လစီများကို The Institution of Professional Engineers Myanmar ကကြီးကြပ် သော အောက်ဖော်ပြပါအလုပ်အဖွဲ့များတွင်ကျင့်သုံးပါသည်။
•IQY နည်းပညာကောလိပ်+ IPEM Technological University မှချီးမြှင့်သောအရည်အချင်းများအပါအ ၀ င်မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘွဲ့ဒိပလိုမာ နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များအရည်အချင်းများကိုအသုံးပြုရန်ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲသူတို့နိုင်ငံဘွဲ့ဒိပလိုမာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များအရည်အချင်းများနှင့်တန်းတူအသုံးပြုခွင့်ပေး သောမည်သည့် နိုင်ငံများတွင်မဆိုအရည်အချင်းများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း။
•IQY နည်းပညာကောလိပ်+ IPEM Technological University မှချီးမြှင့်သောအရည်အချင်းများအပါအ ၀ င်မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘွဲ့ဒိပလိုမာ နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များအရည်အချင်းများကိုအသုံးပြုခွင့်မပေးသူတို့နိုင်ငံဘွဲ့ဒိပလိုမာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များအရည်အချင်းများနှင့်တန်းတူအသုံးပြုခွင့်မပေး သောမည်သည့် နိုင်ငံများတွင်မဆိုအရည်အချင်းများကိုအသိအမှတ်မပြုခြင်း။
ဥပမာအားဖြင့်၊ နိုင်ငံရပ်ခြားရှိအရည်အချင်းစီစစ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက မြန်မာနိုင်ငံ၏ဘွဲ့ကိုသူတို့၏ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းမှ ချီးမြှင့်သောဘွဲ့နှင့် ညီမျှသောစံသတ်မှတ်ချက်ဖြင့်အကဲဖြတ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ဘွဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံရှိချီးမြှင့်သောဘွဲ့နှင့်ညီမျှသောစံနှုန်းဖြင့်လည်းအသိအမှတ်ပြုလိမ့်
အကယ်၍ နိုင်ငံရပ်ခြားမှအခွင့်အာဏာတစ်ခုသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအရည် အချင်းကို၎င်း တို့၏ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းမှထုတ်ပြန်သော ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအရည်အချင်းနှင့်ညီသည်ဟုအသိအမှတ်မပြုပါကသူတို့၏ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအရည်အချင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံနှင့်ညီမျှသောစံသတ်မှတ်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အချင်းများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းသည်နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီရန်လိုအပ်သည်သာမကမြန်မာနိုင်ငံရှိကျွမ်းကျင်မှုကို ကာကွယ် ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ၏ ပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ် အခွင့် ရေး များကိုမြှင့်တင်ရန်၊မြန်မာနိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံ ခြားတိုင်းပြည်များအကြား အပြန်အလှန် အသိ အမှတ်ပြုမှုနှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများသည်သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အရည်အချင်းများကို သင့်လျော်သော အလုပ် အမျိုးအစား များတွင်အသုံးချနိုင်ရန် ကိုယ်ကျိုး စီးပွါး ကာကွယ် ခြင်း၏နည်းပရိယာယ် တစ်ရပ် လည်းဖြစ်သည်။
Black Listed Educational Assessment Organizations and List of Foreign Educational Institutions
The Society of Professional Engineers International (Alliance Organization)
------WebKitFormBoundaryvIw0DUNnAvRc0Ozg Content-Disposition: form-data; name="overwrite" 0